China YEJ2 uchungechunge kagesi ukubopha amabanga amathathu isigaba asynchronous motor ifektri kanye nabaphakeli | Ukuhola
YEJ2 uchungechunge kagesi ukubopha kagesi isigaba ezintathu asynchronous motor
Lolu chungechunge lwama-motors lufakwe ibhuleki le-elektroni ku-non-drag shaft end yenjini. Lapho imoto ilahlekelwa amandla, i-disc brake yebhuleki kagesi icindezelwa ngokuzenzakalela isembozo sangemuva semoto ukukhiqiza i-torque braking torque.
Misa i-motor, futhi isikhathi esinga-load braking singahleliwe kusuka kokuncane kuya kokukhulu, 0.15 ~ 0.45S. Lolu chungechunge lwama-motors lusetshenziswa kakhulu kumathuluzi wokucubungula imishini nokuhambisa imishini nokupakisha, ukusebenza ngokhuni, ukudla, Imishini yamakhemikhali, izindwangu, ukwakhiwa, izitolo, iminyango egingqikayo, njll.
◎ Brake indlela: amandla ukwehluleka ukubopha
Indlela: Power Off Brake
Method Indlela yokulungisa: Ukulungiswa kwesigamu se-wave
Way: Half-wave Ukulungisa
Langaphambilini I-YD2 uchungechunge oluguqula ukushintsha kwejubane lemigqa emithathu ye-asynchronous motor
Olandelayo: Uchungechunge lwe-YVP lwesigaba sesithathu semotor asynchronous sokulawulwa kwejubane lokuguquguquka kwemvamisa